Annaga nagu saabsan - Handan Chuan Ding Electric Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Handan Chuanding Electric Power Co., Ltd., oo la aasaasay 2016, waa shirkad farsamo sare leh oo si xirfad leh ugu hawlan soo saarista iyo iibinta qalabka korontada, xirmooyinka, qalabka qalabka, qalabyada, warshadaha iyo qalabka macdanta, qalabka tareenka, gaadiidka waddooyinka. qalabyada tas-hiilaadka, gudbinta koronta iyo isbeddelka line munaaradda birta iyo accessories birta. Shirkaddu waxay daboolaysaa meel ka badan 11000 mitir oo laba jibbaaran, aag dhisme oo ka badan 8500 mitir oo laba jibbaaran, caasimad ka diiwaan gashan 37.66 milyan yuan, waxay leedahay in ka badan 70 qaybood oo ah qalab gaar ah iyo qalab dheeri ah oo heer caalami ah, oo leh 50 shaqaale. oo ay ku jiraan 15 xirfadlayaal iyo shaqaale farsamo, 4 injineer iyo 2 injineero sare ah.
Sida ku cad shuruudaha nidaamka cusub ee maamulka ganacsiga, shirkadu waxay fulisaa qaab dhismeedka ururka ee functional system, oo ka kooban laba qol toddobo waaxood, oo kala ah, xafiiska maareeyaha guud, shaybaadhka, maaliyadda, saadka, tignoolajiyada, kormeerka tayada, wax soo saarka, kaydinta iyo gaadiidka, ka dib. - waaxda adeegga iibka, hababka maamulka kala duwan, xeerarka iyo xeerarka, fikradda maamulka ee horumarsan, aadanaha.
Tan iyo markii la aasaasay, shirkadda had iyo jeer u hoggaansamaan in "midnimada, pragmatic, hormoodka, hal-abuurka" ruuxa ganacsiga, "badbaadada tayada, horumarinta kala duwan, faa'iido maamulka, ku qanacsanaanta macaamiisha" Ujeedada horumarinta ganacsiga, fiiro gaar ah u horumarinta iyo horumarinta alaabta cusub. maalgelinta sanadlaha ah oo aan ka yarayn 300000 yuan sanadkii, si firfircoon u soo bandhiga tignoolajiyada cusub iyo qalab cusub, si joogto ah u beddelo alaabta, horumarinta alaabta cusub, oo leh sayniska iyo tignoolajiyada horumarsan si ay u soo saaraan alaabta heerka koowaad. Bishii Oktoobar 2017, shirkadu waxay ka gudubtay shahaadada nidaamka maaraynta tayada tayada ISO9001 ee qaranka; bishii Maarso 2018, shirkaddu waxay ku gudubtay shahaadada nidaamka maaraynta deegaanka ISO14001 iyo OHSAS18001 shahaadada nidaamka caafimaadka iyo badbaadada shaqada. Sebtember 27,2020 si aad mustaqbalka ugu guulaysato hal-abuurnimo oo aad ula kulanto macaamiisha tayada leh, badeecadayada ayaa si fiican loogu iibiyay gobolo iyo magaalooyin badan.Shirkaddeena waxay ku guulaysatay ganacsiga tignoolajiyada sare ee qaranka Sebtember 27, 2020
Shirkaddu waxay haysaa qalab tijaabo ah oo dhamaystiran, alaabooyin kala duwan ayaa si joogto ah u sameeya tijaabooyin kala duwan si loo hubiyo in dhammaan wax soo saarka warshaduhu ay yihiin kuwo tayo leh. Shirkaddu waxay si aan leexleexad lahayn ugu hoggaansantaa mabda'a adeegga ee ah "tayada marka hore, isticmaalaha ugu horreeya iyo sumcadda", waxayna buuxisaa baahiyaha macaamiisha gudaha iyo dibadda ee alaabooyinka iyo adeegyada heerka koowaad, waxayna ku guulaysataa kalsoonida macaamiisha. Shirkaddu waxay leedahay tignoolajiyada wax soo saarka ee horumarsan, dhammaan alaabooyinka waxay qaataan tignoolajiyada wax soo saarka sare ee gudaha iyo kuwa caalamiga ah si loo hubiyo tayada badeecada xasilloon oo la isku halayn karo.
U hoggaansanaanta falsafada ganacsiga ee iskaashiga guul-guuleysiga iyo horumarinta guud, waxaan si daacad ah u soo dhaweyneynaa saaxiibada iyo macaamiisha dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha si ay u booqdaan hagida iyo gorgortanka ganacsiga. Waxaan kugu soo dhaweyneynaa adeegga heerka koowaad.